Qatar Airways waxay jartay tirada maylalka loogu baahan yahay duulimaadyada abaalmarinta 49%
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways waxay jartay tirada maylalka loogu baahan yahay duulimaadyada abaalmarinta 49%
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qatar Airways Naadiga loo yaqaan 'Privilege Club' ayaa jaray tirada Qmiles ee loo baahan yahay si loo xajiyo duulimaadyada abaalmarinta illaa iyo 49% horumarin weyn oo ku saabsan isbeddelkeeda si loo siiyo abaalmarinno badan oo ka wanaagsan xubnahooda daacadda u ah.
Shuruudaha Qmiles ee loo yaqaan 'Privilege Club' ayaa loo dhimi doonaa duulimaadyada abaalmarinta ee dhammaan xubnaha la socdaalaya Qatar Airways ee duulimaadyada isku xiraya garoonka ugu wanaagsan Bariga Dhexe, Madaarka Caalamiga ah ee Hamad (HIA), iyo sidoo kale kuwa u socdaalaya ama ka tagaya Doha ilaa Afrika, Ameerika , Aasiya, Yurub, iyo Oceana.
Xubnaha Naadiga Asturnaanta ee ballansada tikidhada abaalmarinta flexi - oo u baahan laba jeer tirada Qmiles ee duulimaadyada abaalmarinta - sidoo kale waxay ka faa'iideysan doonaan dhimistaas. Xubnuhu waxay isticmaali karaan Qcalculator-ka Nadaafadda Naadiga 'Privilege Club' si ay u ogaadaan tirada Qmiles ee looga baahan yahay duulimaadyada abaalmarinta waddada ay doorbidaan iyo doorashada qolka.
Nidaamka cusub, ee Class Class, duulimaadyada abaalmarinta celinta ee Sao Paulo (GRU) ilaa Tokyo (HND) waxaa hoos loo dhigay 49% laga bilaabo 391,000 ilaa 200,000 Qmiles, laga bilaabo Auckland (AKL) ilaa Los Angeles (LAX) boqolkiiba 45% laga bilaabo 434,000 ilaa 240,000, laga bilaabo Paris (CDG) ilaa Bangkok (BKK) boqolkiiba 40% laga bilaabo 251,000 ilaa 150,000 iyo Doha (DOH) ilaa London (LHR) boqolkiiba 26% laga bilaabo 116,000 ilaa 86,000. Fasalka Dhaqaalaha, duulimaadyada abaalmarinta soo celinta ee Mumbai (BOM) ilaa New York (JFK) ayaa hoos loo dhigay boqolkiiba 39% boqolkiiba 131,500 ilaa 80,000 Qmiles.
Madaxa Ganacsiga ee Qatar Airways, Mr. Thierry Antinori, ayaa yiri: “Qmiles-kaaga hadda wuu ku sii dheereynayaa markii aad nala raacayso duulimaadyada dhexdhexaadka ah, kuwa dhaadheer iyo kuwa dheer. Waxaan kordhinay awooddooda dadaal muhiim ah oo aan ku hubinayno in xubnaheena sharafta leh ee Qatar Airways Privilege Club si weyn loogu abaalmarin doono daacadnimadooda. Tallaabadani waa qayb ka mid ah isbeddelka ballaadhan ee barnaamijkeenna daacadda ah oo ay ku soo kordheen dhowr waxyaalood oo horumar ah sannadkan - oo leh isbeddello xiiso badan oo la raaci doono bilaha soo socda. Ujeeddadeennu waa inaan dhisno oo aan iska dhigno inaan noqonno hoggaamiye daacad u ah barnaamijka duulimaadka ee Bariga Dhexe iyo midka ugu fiican adduunka. ”
Horaantii sanadkaan, Qatar Airways Privilege Club waxay dib u eegis ku sameysay siyaasadeeda Qmiles si ay u bixiso dabacsanaan dheeri ah - marka xubin kasbato ama qarash gareeyo Qmiles, isku dheelitirkooda hadda wuxuu shaqeynayaa 36 bilood. Intaa waxaa sii dheer, Naadiga loo yaqaan 'Privilege Club' ayaa dhowaan ka saaray khidmadaha ballansashada duulimaadyada abaalmarinta. Xubnaha ballansanaya duulimaadyada abaalmarinta Heerka Ganacsiga waxay sii wadi doonaan helitaanka helitaanka qaddarinta - oo ay ku jiraan Al Mourjan Class Class Lounge ee HIA - iyo qoondaynta kuraasta.
Xubnaha Naadiga Xaquuqda Dumarku waxay sii wadi doonaan inay kasbadaan Qmiles markay la safrayaan Qatar Airways, airlines oneworld®, ama mid kamid ah shirkadaha duulimaadyada la shaqeeya. Waxay sidoo kale kasban karaan Qmiles iyagoo adeegsanaya kaararka amaahda ee Qatar Airways iyo markay wax la iibsanayso naadiga tafaariiqda ee loo yaqaan 'Privilege Club' iyo kuwa nolosha la wadaaga Qmiles waxaa lagu soo iibsan karaa carada faa'iidooyinka xiisaha leh oo ay ku jiraan duulimaadyada abaalmarinta, casriyeynta ama bagaashka dheeriga ah ee Qatar Airways, ka adeegashada Qatar Duty Free iyo sidoo kale duulimaadyada iyo joogitaanka hudheellada ee lala wadaago.